Nri a na-ehichapụ bụ ụzọ magburu onwe ya, na-enye gị ohere ịkpụzi onwe gị nye ndị nwere nnukwu nsogbu na ọchịchọ. Nke a bụ otu n'ime usoro nchịkwa ole na ole na-adịghị egbochi nri dị ukwuu. E nwere ọdịiche dịgasị iche iche nke nri a, ma ugbu a anyị na-eleba anya na abụọ ndị a ma ama.
Ihe na-eri nri kafir
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nri, ị nwere ike ịnụ banyere echiche dị otú ahụ, dị ka ụbọchị na-ebudata kefir. N'oge a, ị gaghị eri ihe ọ bụla, kama ọ bụ naanị mmanya 1% kefir, nke na-enye gị ohere ka ị ghara ịta ụnwụ ma nwee mmetụta nke ọma. Nke a bụ ihe ndabere maka nri a na-achaghị acha - nke bụ eziokwu, ma ọ bụrụ na ụbọchị ndị ahụ dị irè na-adị nanị 1-2 ugboro n'izu, mgbe ahụ, na nke a, ha ga-agafe n'ụbọchị.
Ya mere, ụbọchị niile dị nfe ị nwere ike iri ihe ọ bụla obi gị chọrọ (n'ezie, n'ime oke ezi uche), ma na ọnụ ọgụgụ - ị na-eme ndokwa ịbudata na kefir. Ị nwere ike iri nri a ma ọ bụrụhaala na ịchọrọ, ọ dịghị njọ n'anụ ahụ, ọ ga-enyere gị aka iji nwayọ nwayọ dalata, ma ihe ọ bụla anaghị ajụ.
Echefula na ụbọchị ziri ezi na-ewere na ị ga-aṅụ ihe dị ka iko nke kefir ihe dịka awa ọ bụla (ọ bụrụ na agụụ na-agụ gị, ịnwere ike tinye 1-2 ntụpọ nke eriri ma ọ bụ ntụ ọka flax nke a zụtara na ahịa ọgwụ ọtụtụ ugboro n'ụbọchị). N'otu oge ahụ, mmadụ ekwesịghị ichefu na ị ga-aṅụ mmiri - iko iko 6-8 zuru oke. Iji ṅụọ ya, ọ dịghị mkpa ịchọta ya n'otu oge, kama ọkara otu iko site n'oge ruo n'oge - ma ọ bụghị na ahụ ga-esi ike.
Nri iri nri na-enye ihe kachasị ịtụnanya: ọ bụrụ na ịnweghị "ọpụpụ" na ụbọchị mgbe ihe niile ga-ekwe omume, mgbe ahụ ị ga-atụfu ihe dị ka kilogram 2-3 n'izu mbụ.
Ụdị nke abụọ nke nri a na-egbuke egbuke
Ụdị nke abụọ nke nri na - ewe oge iri 10. Site na oge a, a na-ekenye ụbọchị 5 maka nri nri carbohydrate, na ụbọchị 5 ọzọ maka protein. Ụbọchị ndị a ga-agagharị, nke na-eme ka aha nri rie. Ịdị arọ na nri dị otú ahụ na nrubeisi siri ike nwere ike ịdị na kilogram 5. Ihe ndị na-esi na ya pụta bụ ihe a na-ahụ anya, na nke a bụ eziokwu ọbụghị na ị ghaghị ịnwụ onwe gị. Ya mere, tụlee ndepụta nke oge abụọ a.
Na edemede: 1 iko mmiri ọkụ.
Nri ụtụtụ - àkwá a gbakọtara agba, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Nri ehihie: anụ ọkụkọ ọkụ ọkụ (200-300 grams).
Nri: iko tii na-enweghị shuga, ntakịrị ara ọkụkọ (ruo 150 g).
Nri abalị: anụ ọkụkọ ọkụ (200-300 grams).
Iji sie ọkụkọ, ị nwere ike ịgbakwunye salad akwukwo, eji akwa lemon, mmanya ma ọ bụ obere mmanụ mmanụ. Ke adianade do, ọ dị mma maka ọkụkọ na nnu na obere nnu nke nnu na ịgbakwunye ngwa nri mgbe esi nri.
Nri ụtụtụ: nri salad ọhụrụ.
Nri ehihie: akwụkwọ nri na-acha akwụkwọ ndụ (ọ bụla ma e wezụga poteto).
Nri: ihe oriri ọ bụla.
Nri abalị: nri nri.
N'ụbọchị, ị nwere ike iri nri snacks na-enweghị nsọtụ na akwụkwọ nri. Tụkwasị na nke ahụ, ọ dị mkpa ka ị ghara ichefu na ị ga-aṅụ iko iko nke mmiri dị ọcha nke na-abụghị mmiri ọkụ kwa ụbọchị.
Akwụkwọ nri nwere ike ịbụ ihe ọ bụla, ma ọ kachasị mma ịgụnye kabeeji kwa ụbọchị na nri: na calorie kacha nta, ngwaahịa a dị ebube na-eburu ihe onwunwe na eriri.
Ihe oriri a na-egbuke egbuke nwere ezi nzaghachi na nbona: ya mere, n'enweghị mgbalị ọ bụla, ị nwere ike ịmepụta ụdị mmadụ gị n'ime ụbọchị 10. Ịhapụ nri a, yana nke ọ bụla ọzọ, kwesịrị iji nke nta nke nta: jikọọ nri nke ụbọchị abụọ a ma bụrụ naanị n'ime ụbọchị ole na ole ị nwere ike itinye ngwaahịa ọhụrụ.
Nri maka hypothyroidism
Nri na neurodermatitis
Dietitian Margarita Koroleva - ndụmọdụ
Achịcha Celery - Nri
Nri "Amuru Ọzọ"
Nri na gastritis nke afo
Nri nri - menu
Nri na imeju nfe - iwu nri na menu nri
Olee ihe dị mkpa Afrikantova Marina bụ n'ezie?
Nri dị mfe maka ngwa ngwa na-eto eto
Nri nri Mediterranean - menu maka izu
Gosi nri maka ụbọchị 3 - 5 n'arọ
Nri na calorie
Kedu ihe dị mkpa bụ Katya Klap?
Kedu ihe bụ ire ure na olee otú e si egosipụta ya?
Kedu ka esi mụta ijide mmetụta uche?
Ọrịa afọ na ụmụaka - mgbaàmà
Angina - ọgwụgwọ na-enweghị ọgwụ nje
Klas maka ụmụaka 3-4 afọ
Winter Nubuck akpụkpọ ụkwụ
Kedu ihe ị ga-eji mee nwata n'afọ abụọ?
Canada Sphynx - nlekọta na ọdịnaya
Enwere ike inwe marshmallows n'oge ị na-ara nwa?
Ejiri mmiri na ọdọ mmiri
Rhinitis na-egbu egbu - mgbaàmà
Ego ole ka ị ga-anọdụ ala n'elu twine?
Ihe eji achọ mma maka ime
Onye na-eri anụ Lasagna
Winter jaket-pilot - akpụkpọ anụ jaket na aji
Efere site na obi ọkụkọ - na-adọrọ mmasị ntụziaka site na-ngwaahịa maka ọ bụla uto!
Esi esi esi nri ohia na anụ?
Olee otú ịkwụsị ịhụ di ya n'anya?
Mmetụta uche - ọrịa kachasị njọ ma dị iche iche
Sodium glutamate - uru ma ọ bụ nsogbu?
Ejiri oji na nwa
Kedu esi esi esi nri na tebụl?